Raga kacsiga badan ee manyikada qabo iyo gabdhaha u roon - iftineducation.com
aadan21 / December 5, 2016
iftineducation.com – Raga kacsiga badan ee manyikada qabo iyo gabdhaha u roon
Waxaa dhawaan la soo shaac bashay arimo badan kuwas ka hadlaya ilaa dhowr arimood oo ku saabsan raga iyo dumar kuwa ugu kacsiga badan marka la joogo xiliga sariirta ama ciyaarta sariirta.
Warbixnta ayaa lagu ogaaday in raga qaar ay ka kacsi badan yhiin dumar sunnada taas ayaana u sabab ah ilaa dhowr meelood markii ragaas laga taabto uu dareenkooda si dhab ah u yimaado halka raga kale hadii melahas laga taabto aysan wax sameyn ah yelaeyn.
Melahasa waxaa kamid hadii laga taabto ragas in ay ka helyaan raaxo aad u macaan waana arin ku haboon dumar ay ragaas qabaan waayo waxaa xaaska looga bahanyahay in mar walba ay ogaato halka uu raaxada ka helo.
Hadaba Ragaas waxa ka mid kuwa leh calamadahan.
1: Hadii aad isku aragto in uu dareenkada yimaado xiliga aad arato haween waxaad tahay nin ka kacsi badan gabadh sunnada.
2: Hadii aad kacsato intaad arin aad horay usoo sameysay aad xasuusato waxaad tahay mayikalow.
3: Hadii aad Baabur la raacdo dumar oo waliba ay dhinacada soo xigsado gabar markey jirkada ku dhacdo hadii aad dareen gaar ah dareento waxaad tahay nin ka kacsi bdan gabadha sunnada ah.
Raga Qaar oo La Ogaaday in ay ka Kacsi Badan Yihin Gabdha Sunnada ah Ragas Maxey Dheeryihii Raga kale (Aqri Sababta).